तपाईंको उद्धारको लागि चिन्तित - विश्व स्विट्जरल्याण्डको विश्वव्यापी चर्च
लेख > परमेश्वरसँगको अनुभव > तपाईंको उद्धारको लागि चिन्तित
तपाईंको मुक्तिको बारेमा चिन्ता छ?
किन मानिसहरूलाई, र आफैंले स्वीकार गरेका इसाईहरू, बिना शर्त अनुग्रहमा विश्वास गर्न असम्भव लाग्छ? आजका इसाईहरू बीचको अवस्थित धारणा अझै पनि यो हो कि अन्तमा मुक्ति भनेको के गरेको हो वा नगरेकोमा निर्भर गर्दछ। परमेश्वर यति उच्च हुनुहुन्छ कि कुनै मानिस उहाँ माथि हिंड्न सक्दैन। यति सम्म कि यो समात्न सकिदैन। यति गहिरो छ कि तपाईं यस भित्र पस्न सक्नुहुन्न। के तपाईंलाई त्यो परम्परागत सुसमाचार गीत याद छ?
साना बच्चाहरू यस गीतको साथ गाउन मन पराउँछन् किनभने तिनीहरू उचित आन्दोलनको साथ शब्दहरू साथ गर्न सक्छन्। "धेरै उच्च" ... र उनीहरूको टाउकोमा हात समात्नुहोस्; "अहिलेसम्म" ... र तिनीहरूका पाखुराहरूलाई फराकिलो: "यति गहिरो" ... र उनीहरू सकेसम्म तल क्रौंच गर्नुहोस्। यो सुन्दर गीत गाउन रमाईलो छ र यसले बच्चाहरूलाई परमेश्वरको प्रकृतिको बारेमा महत्त्वपूर्ण सत्य सिकाउँदछ। तर हामी बुढेसकालमा कति जनाले यो विश्वास गर्छन्? केही वर्ष पहिले, इमर्जिंग ट्रेंड्स - एउटा प्रिन्स्टन धर्म अनुसंधान केन्द्र पत्रिकाले रिपोर्ट गरेको थियो कि Americans 56 प्रतिशत अमेरिकीहरू जसले आफूलाई ईसाई भनेर वर्णन गर्दछन् उनीहरू भन्छन कि जब उनीहरु आफ्नो मृत्युको बारेमा सोच्दछन्, उनीहरु यस बारे एकदम वा चिन्तित हुन्छन् " भगवान माफी »।
ग्यालप इन्स्टिच्युटको एक अध्ययनमा आधारित उक्त रिपोर्टले अझ यसो भन्छ: "यस्तो नतिजाले संयुक्त राज्यका मसीहीहरूले" अनुग्रह "को ईसाई अर्थ के हो भनेर बुझेको छ कि छैन र यसले ईसाईहरुमा बाइबलीय शिक्षालाई सुदृढ पार्ने सल्लाह दिन्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न उठाउँदछ। चर्चहरू सिकाउन। किन मानिसहरू र आत्म-इसाई इसाईहरूले यो बिना शर्त अनुग्रहमा विश्वास गर्न असम्भव ठान्छन्? प्रोटेस्टेन्ट सुधारको आधार बाइबलको यो शिक्षा थियो कि मुक्ति - पापको पूर्ण क्षमा र परमेश्वरसँग मेलमिलाप - केवल परमेश्वरको अनुग्रहबाट प्राप्त भएको थियो।
यद्यपि, इसाईहरूको बिचमा रहेको अवधारणा अझै पनि यो हो कि मुक्ति अन्ततः तपाईले के गर्नुभयो वा नगरेकोमा निर्भर गर्दछ। एउटाले महान ईश्वरीय सन्तुलनको कल्पना गर्दछ: एउटा कचौरामा राम्रो कामहरू र अर्कोमा खराब कार्यहरू। सबैभन्दा ठूलो तौल सहितको कचौरा मुक्तिको लागि महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारण हामी डराउँछौं। के यो अदालतमा बाहिर जान्छ कि हाम्रा पापहरूले "यती उच्च" डाईदिएको छ कि बुबाले उनीहरूलाई देख्न पनि सक्दैनन्, "यति धेरै" कि येशूको रगतले उनीहरूलाई ढाक्न सक्दैन, र हामी "यती न्यून" थियौं कि? के पवित्र आत्माले हामीलाई भेट्न सक्नुहुन्न? सत्य के हो भने, हामीले भगवान्‌ले हामीलाई क्षमा दिनुहुन्छ कि भनेर चिन्ता लिनु पर्दैन; उसले यो गरिसकेको छ: “हामी पापी छँदा ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो,” बाइबलले रोमी::। मा बताउँछ।
परिभाषा द्वारा, अनुग्रह असुरक्षित छ। यो भुक्तानी होइन। यो प्रेमको नि: शुल्क उपहार हो। प्रत्येक व्यक्ति जो यसलाई स्वीकार गर्न चाहान्छ यसलाई प्राप्त गर्दछ। हामीले परमेश्वरलाई नयाँ तरिकाले हेर्नुपर्दछ, जसरी बाइबलले उनलाई देखाउँदछ। भगवान हाम्रो उद्धारक हुनुहुन्छ, हाम्रो उद्धारक होइन। उहाँ हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, हाम्रो एनिहिलेटर होइन। ऊ हाम्रो मित्र हो, हाम्रो शत्रु होइन। भगवान हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ।
त्यो बाइबलको सन्देश हो। यो परमेश्वरको अनुग्रहको सन्देश हो। न्यायाधीशले हाम्रो उद्धार सुनिश्चित गर्न पहिले नै आवश्यक सबै काम गरिसकेका छन। येशूले हामीलाई ल्याउनुभएको सुसमाचार यही हो। पुरानो सुसमाचारको गीतका केही संस्करणहरू कोरसको साथ अन्त हुन्छ, "तपाईं ढोकाबाट भित्र पस्नु पर्छ"। ढोका लुकेको प्रवेशद्वार होइन जुन केहि थोरैले मात्र भेट्टाउन सक्छन्। मत्ती:: --7,7 मा येशूले हामीलाई सोध्नुभयो: «सोध्नुहोस्, यो तपाईंलाई दिइनेछ; खोजी गर्नुहोस्, भेट्टाउनुहुनेछ; ढकढक्याइ, ताकि तपाईं खोलिनुहुनेछ। किनभने हरेक जसले माग्दछ, उसले पाउँदछ; र जसले त्यहाँ खोजी गर्दछ उसले भेट्टाउँदछ; अनि जसले ढक्ढकाँउछ, ढोका खोलिनेछ।